Home » Tag Archives: FCC သည်
Tag Archives: FCC သည်
Bexel သစ်ကို FCC သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူဗိုလ်မှူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, align နှင့်အတူအသံစှမျးတိုးချဲ့
Bexel တစ်ခု NEP အသံလွှင့်န်ဆောင်မှုများကုမ္ပဏီ, ပိုကောင်း Bexel ရဲ့အငှားပစ္စည်းကိရိယာများဟာယပူဇော်သက္ကာကိုခိုင်ခံ့စေဖို့အသံနှင့် RF အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစာရင်း၏အဓိကဝယ်ယူဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏ client များအစေခံရန်နည်းပညာအသစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဒီနှစ်အသစ်သောအသံနည်းပညာအပေါ် $ 1.5m ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အငှားစာရင်းတိုးပွါးရသောမသာ, ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် ...
မွန်ရိုးအီလက်ထရောနစ် '' အက်ဒွပ် Czarnecki FEMA အမျိုးသားအကြံပေးကောင်စီ IPAWS ဆပ်ကော်မတီမှခနျ့အပျခံ
LYNDONVILLE, နယူးယော့ - ဇူလိုင်လ 20, 2017 - မွန်ရိုးအီလက်ထရောနစ်, cable IPTV, ထုတ်လွှင့်, အစိုးရနှင့်တက္ကသိုလ်အသုံးပြုသူများအတွက်အရေးပေါ်သတင်းအချက်အလက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့အကြီးတန်းဒါရိုက်တာမဟာဗျူဟာနှင့်အစိုးရရေးရာအက်ဒွပ် Czarnecki ဖက်ဒရယ်ခန့်အပ်ထားပြီးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီ (FEMA) အမျိုးသားအကြံပေးကောင်စီ (NAC) ပေါင်းစည်းပြည်သူ့အချက်ပေးနှင့်သတိပေးခြင်းစနစ် (IPAWS) ဆပ်ကော်မတီ။ တစ်ဦးအဖြစ် ...
170 အုပ်စုများအသားတင်ကြားနေရေးစောငျ့ရှောကျဖို့ FCC သည်ဥက္ကဋ္ဌကိုမေး
အင်ဒရူး V. Pestano by | မတ်လ 8, 2017 မှာ 1: 00 pm တွင်မတ်လ 8 (UPI) - ကျော် 170 အဖွဲ့အစည်းများသူကွန်ဂရက်မတိုင်မီသက်သေခံရှေ့တော်၌ထိုနေ့ရက်သည်ပိုက်ကွန်ကိုကြားနေရေးစောငျ့ရှောကျဖို့ FCC သည်ဥက္ကဋ္ဌ Ajit Pai တိုက်တွန်းထားတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါစာဝိဇ္ဇာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်အဖွဲ့အစည်းများ, MoveOn.org, Greenpeace သဘာအမေရိကန်နိုင်ငံ, အီရတ်တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ...
Volicon PBS နည်းပညာညီလာခံမှာစာတန်းထိုးလေးစားလိုက်နာခြင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာအပေါ်တင်ပြ
ဘာလင်တန်, Mass - ။ မတ်လ 22, 2016 - Volicon ယနေ့အင်ဒရူး Sachs, ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ကုမ္ပဏီ၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, အ PBS နည်းပညာညီလာခံ (TechCon16), Las Vegas မှာအဆိုပါ Mirage ဟိုတယ် & ကာစီနိုမှာဧပြီလ 13-15, စဉ်အတွင်းတင်ပြလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် ။ တစ်ဦး session ကို "စာတန်းထိုးအရည်အသွေးဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း" အမည်ရနှင့် 11 ဘို့စီစဉ်ထားခုနှစ်တွင်: 30 ဧပြီလ 15 အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကို, Sachs, စတိဗ် Scheel join ပါလိမ့်မယ် ...
Telestream အွန်လိုင်း Video Clips ၏စာတန်းထိုးများအတွက်နယူး FCC သည်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ကိုသုံးပါနှင့်အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်လွယ်ကူကမ်းလှမ်း
Telestream, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး, ဗီဒီယို၏စာတန်းထိုးလိုအပ်သစ်ကို FCC သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ, နောက်ဆုံးပေါ်ယင်း၏စာတန်းထိုးဆော့ဖ်ဝဲလ်များလွှတ်ပေးရန်, (Mac အတွက်) MacCaption နှင့် (Windows အတွက်) CaptionMaker ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် အွန်လိုင်း posted ဖြစ်ကြောင်းကလစ်များ။ အဆိုပါ FCC သည်မကြာသေးမီကအိုင်ပီများအတွက်လက်ရှိစာတန်းထိုးလိုအပ်ချက်များကိုဗီဒီယိုကိုကယ်မနှုတ်ကြောင်းကိုအုပ်ချုပ် ...
အဆိုပါလေတပ်အတွက် Up ကို: FCC သည်လေလံ
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်နောက်တဖန်ထိုကာလရဲ့ - ဟယ်လို! ကောင်းပြီ, ဟုတ်ကဲ့နှင့်မျှမတို့ - သရဲတစ္ဆေများနှင့်မှင်စာ, ပင်လယ်ဓားပြတွေနဲ့ Princess,်Spectre နှင့် superhero ရုံထောင့်ပတ်လည် ... ဒါပေမယ့်ဘာမိုဃ်းတိမ်ထဲမှာအတူစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်သရဲတစ္ဆေ &်Spectre ပေမယ့်ရေဒီယိုလှိုင်းများ (နှင့်, OK ကို, ပင်လယ်ဓားပြတွေ) မရှိကြပေ။ ရှေးရှေးဟုတ်ကဲ့, က FCC သည်လေလံ၏အခြားပတ်ပတ်လည်ဘို့တစ်ဖန်အချိန်ပဲ! တန်ဖိုးနှင့်အတူ ...
ဝက်ဘ်ကလီပ်များအဘို့စာတန်းထိုးတောင်းဆိုဖို့ FCC သည်မဲ
Stephanie Mlot / ဇူလိုင်လ 11, 2014 04 by: 28pm EST အဆိုပါပြောင်းရွှေ့ကလစ်ပ်, မယ့် Full-အရှည်ဗီဒီယိုများပေါ်တွင်စာတန်းထိုးလိုအပ်မှ 2012 အတွက်မွေးစား FCC သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတိုးချဲ့။ အဆိုပါဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင်ယနေ့တညီတညွတ်တည်းအချို့သောအွန်လိုင်းဗီဒီယိုများအတွက်စာတန်းထိုးလိုအပ်မယ့်စည်းမျဉ်းကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါအပြောင်းအရွေ့အေဂျင်စီစာတန်းထိုးလိုအပ်မှ 2012 အတွက်မွေးစားကြောင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတိုးချဲ့ ...